ANTSOHIHY : Mpianatra 1 052 nizaràna fitaovam-pianarana feno avy amin’ny Filoham-pirenena
Mpianatra miisa 1052 no nisitraka fitaovam-pianarana feno avy amin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, tao amin’ny EPP Haute Ville Antsohihy, omaly. 16 octobre 2020
Feno ny fitaovam-pianarana nozaraina ho an’ny mpianatra izay ahitana tablie, kahie, trosy, penisilihazo miloko na “crayons de couleurs”, kitapo sy kojakoja samihafa.
Notsindrian’ny Filoha manokana ny maha- zava-dehibe ny fampidirana ny
« gourdes » ao anatin’ny fitaovam-pianarana amin’izao fotoana. Ilaina, hoy izy, ny fanomezana rano fisotro ho an’ny ankizy mandritra ny tontolo andro ianarana.
Hampiakatra ny tahan’ny fampianarana
Mametraka tanjona ny hampiakatra ny tahan’ny fampianarana koa ny Filoha Andry Rajoelina. Misy, araka izany, ny fanohanana sy ny fanampiana nentin’ny Fanjakana hahafahana mahatratra izany tanjona izany. Anisany fanampiana voalohany avy amin’ny Filoha ny fanomezana ny fampitaovana ny mpianatra tsirairay amin’ny alalan’ny fanomezana ny “kits scolaires”. Nozaraina ihany koa ny boky fampianarana sy ny Rakibolana eny amin’ny sekolim-panjakana. Manamaivana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’ny fandaniana amin’ny fividianana boky izany.
Nofoanana ny vola aloan’ny ray aman-dreny
Ezaka nataon’ny Fanjakana hanatsarana sy hampiakarana ny tahan’ny fampianarana ihany koa ny fanafoanana ny saran’ny fampidirana mianatra sy ny fametrahana ny Fotodrafitrasa manarapenitra eny amin’ny sekolim-panjakana. Efa nahitana fiakarany be ny tahan’ny mpianatra miditra an-tsekoly amin’izao taom-pianarana 2020-2021 izao, raha ny tatitra voarain’ny Filoha na nahiana hampidina ny tahan’ny fidirana an-tsekoly aza ny aretina covid-19.
Fifaninanana hahazoana bisikileta
Ho fampirisihana ny ankizy hazoto hianatra hatrany, misokatra ny fifaninanana amin’ny sekolim-panjakana amin’izao ho an’ireo kilasy T5. Hahazo fanomezana bisikileta avokoa ireo telo voalohany amin’ny fanadinana CEPE, araka ny fampanantenan’ny Filoha, izay fanomezana azo avy amin’ny Governemantan’ i Inde. Nanamafy ny tokony hampianarana voambolana miainga amin’ny Rakibolana ireo mpianatra ny Filoha. Hahafahana manampy ny ankizy hahay haneho hevitra sy ho sahy hiteny ny famakiana isan’andro sy fampiasana ny Rakibolana.